လူမှုရှုခင်း | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 106
ဥက္ကလံမြို့ တိုင်းရင်းသားမိသားစုများ၏ မျိုးဆက်သစ်တို့၏ ရန်ပုံငွေပွဲစည်ကား ကျော်နိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၉ ၊ ၂၀၁၂ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်္ဘာလ(၁၇)ရက်နေ့ တွင် ဆန်ဖရန်စစ္စကိုဘေးဧရိယာနှင့် ဥက္ကလံမြို့တို့မှာ နေထိုင်ကြသော မြန်မာတိုင်းရင်းသားများ၏ ရင်သွေးများ၊ မျိုးဆက်သစ် သားသမီးများမှ စုစည်း တည်ထောင်ထားသော ( The Refugee Youth Ambassadors )က ဦးစည်း၍ မြန်မာ့တိုင်းရင်းသားရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုအက ဖျှော်ဖြေပွဲကို ဥက္ကလံမြို့ တွင် စည်းကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပခဲ့သည်။ ထိုရန်ပုံငွေရှာပွဲအား ပရိတ်သတ် နှစ်ရာကျော်တက်ရောက်၍ တိုင်းရင်းသားလူငယ်များရဲ့ အားမာန်ကို မြှင့်တင်ပေးခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါ မျိုးဆက်သစ်တို့အတွက် ပညာသင်ဆုများ ချီးမြှင့်နိုင်ဖို့အတွက်လည်း ကြိုးစားကြမည်ဟု သိရသည်။ Tags: ဆန်ဖရန် Related posts...
ဟန်ဝင်း နိုဝင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၂ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမားတွေကို ထိုင်းအလုပ်သမားတွေနဲ့ တန်းတူ လုပ်ခလစာရရှိဖို့အတွက် ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့ ထိုင်းနိုင်ငံဒုတိယ၀န်ကြီးချုပ်က သတင်းထောက်တွေကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အလုပ်သမား အရေး ဆောင်ရွက်နေသူတွေကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေကို ထိုင်းအလုပ်သမားတွေနဲ့တန်းတူ လုပ်ခလစာရရှိဖို့ ထိုင်းနိုင်ငံ ဥပဒေက ပြဋ္ဌာန်းထားပြီးဖြစ်ပေမယ့် အလုပ်ရှင်များက လိုက်နာခြင်းမရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားအမြောက်အမြား ဝင်ရောက်အလုပ်လုပ်နေကြတယ်ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံက သမ္မတကြီးအသိပါ။ လုပ်ငန်း ခွင်တွေမှာ ထိုင်းလူမျိုးတွေနဲ့အတူတူ အလုပ်လုပ်ရရင် မြန်မာနိုင်ငံသား တွေဟာ ထိုင်းတွေမလုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်တွေကို လုပ်ရပါ တယ်။မြန်မာအလုပ်သမားတွေ ထိုင်းနိုင်ငံသား တွေနဲ့အတူ တန်းတူအခွင့်ရေးရနေတယ်ဆိုပြီး အချို့ NGO အဖွဲ့များနှင့် ထိုင်းအစိုးရကပါ ပြောနေကြပါတယ်။ တကယ့် လက်တွေ့မှာတော့ ပြောသလိုမဖြစ်သေးပါဘူး။...
ခင်မောင်ထွေး (မဟာချိုင်း) နိုဝင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၂ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ပြည်သူကတင်မြှောက်သော လွတ်တော် အရပ်ရပ်တို့နှင့်အတူ ပြည်သူကတင်သော နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ များဖြင့် ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းကို သွားနေပါတယ် ဆိုတဲ့ အချက်နဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့လည်း ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီအရေးကို အလျှင်အမြန်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင် ရွက်နေ သည်ဆိုသည့်အချက်မှာ မျက်မြင်များဖြစ်သဖြင့် အထူးပြောရန်လိုမည် မထင်ပါ။နိုင်ငံအတွင်း ကုန်စည် ပစ္စည်းများနှင့်ပါတ်သက်သော ကိစ္စရပ်အ၀၀ကို ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း နိုင်ငံခြားမှ တင်သွင်းသည့်ကုန်ပစ္စည်း များကိစ္စ ပွင့်လင်းလာသည်ကိုလည်းကြိုဆိုပါတယ်။ယခင်က အလွန်ဈေးကြီးခဲ့သော မော်တော်ယဉ်ကဲ့သို့ ပစ္စည်းများလည်း ယခုအခါတွင်ဈေးများကျဆင်းစေပြီးလူလတ်တန်းစားများဝယ်ယူနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးလာသည်ကိုလည်း သိကြားနေ ရပါ တယ်။ ဒီအတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ အမှန်တစ်ကယ်တော့ ချမ်းသာဆင်းရဲ ကွာဟလွန်းသည်ဖြစ်ရာ အလွန်ချမ်းသာသူများက ဒီမိုကရေစီရဲ့...
သီချင်းရုပ်သံ နိုဝင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၂ ကဗျာ – မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း) သံစဉ်/တေးဆို – ခင်မောင်တိုး ခင်မောင်တိုးချစ်သူများ ခံစားကြည့်နိုင်ကြပါစေ၊ ဒီ DVD ဟာ ခင်မောင်တိုးစင်ကာပူမှာ ဆေးလာမကုခင် သူငယ်ချင်းများနဲ့ RIT မှာ ရုိုက်ထားတာပါ၊ ဒီ DVD ဟာ Mech 72 ရဲ့ မူပိုင် ဖြစ်သော်လည်း No tags for this post. Related posts No related posts.
ရာမညသား နိုဝင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၂ မွန်ပြည်နယ် ပြည်နယ်ရဲမင်းကြီးအပြောင်းအရွှေ့သာဖြစ်ပေါ်လာေ သ်ာလည်း ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပဲတည်ငြိမ်လျှက်ရှိသော မြိုင်သာယာရပ် ကွက်ရှိ အနှိပ်ခန်းများမှာ ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်လျှက်ပင်ရှိနေပါသည်။ မြိုင်သာယာရပ်ကွက်၊ ရှင်စောပုလမ်း၊ အမှတ် (၂၃) တွင် ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်နေသော ဂိမ်းဆိုင်ဗန်းပြအနှိပ်ခန်း၊ အမှတ်(၄၇) တွင်ဖွင့်လှစ် လုပ်ကိုင်နေသော ယခင်ထမင်းဆိုင်ဗန်းပြအနှိပ်ခန်းမှာ ယခုအခါ အရက်ဆိုင်ဗန်းပြအနှိပ်ခန်းအဖြစ်သို့သာ ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ ယင်းကဲ့သို့ ထမင်းဆိုင်ဗန်းပြအနှိပ်ခန်းမှ အရက်ဆိုင်ဗန်းပြအနှိပ်ခန်းအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်ရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းကို သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိလူကြီးမင်းအပေါင်းတို့အားလည်းကောင်း၊ အွန်လိုင်းမီဒီယာများမှလည်ကောင်း အကြိမ်ကြိမ် အခါခါ အသိပေးတိုင်ကြားခဲ့သော်လည်း အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိခဲ့ပဲယခုအခါ အရက်ဆိုင်ဗန်းပြ ဂိမ်းဆိုင်ဗန်းပြ အနှိပ်ခန်းများအဖြစ် ယခု နိုဝင်ဘာလ တစ်ရက်နေ့မှ စတင်ကာ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်လာကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မွန်ပြည်နယ် ပြည်နယ်ရဲမင်းကြီး အပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော်လည်း ရှင်စောပုလမ်းသူလမ်းသားများမျှော်လင့်တောင့်တနေခဲ့သော လမ်းအတွင်းရှိ တရားမ၀င်အနှိပ်ခန်းများမှာ ကွယ်ပျောက်သွားခဲ့ခြင်းမရှိပဲ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်လာကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယခုကဲ့သို့...
ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာ ကချင်ကွန်မြူနီတီ ကချင်စစ်ဘေးကူညီရေး ရန်ပုံငွေဈေးရောင်းမည် မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ နိုဝင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၂ လက်ခံရရှိသော ဖိတ်ကြားစာများအရ ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာ ဒေသခံ ကချင်မိသားစုများ၊ အသင်းအဖွဲ့များက လာမည့် ဒီဇင်ဘာ ၈၊ စနေနေ့တွင် ဒေလီစီးတီး၊ Little Theater တွင် ကချင်ပြည်နယ်က စစ်ဘေးသင့် ကချင်ဒုက္ခသည်များ ကူညီရေး ရန်ပုံငွေဈေးရောင်းပွဲတော် ကျင်းပမည်ဟု သိရပါသည်။ ယခင်နှစ်ကလည်း ကချင်ကွန်မြုနီတီက ရန်ပုံငွေပြုလုပ်၍ ကချင်ဒုက္ခသည်များကို ကူညီခဲ့ကြသည်။ ယခုနှစ်တွင် ကချင်စားသောက်ဖွယ်ရာများ၊ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတို့၏ ရိုးရာအစားအစာများကို တည်ခင်းရောင်းချပြီး ရန်ပုံငွေလှူဒါန်းခြင်းတို့ ပြုလုပ်မည် ဖြစ်သည်။ ကချင်ဒေသ မျက်မှောက်မြင်ကွင်း ဓာတ်ပုံပြပွဲလည်း ကျင်းပမည်ဟု သိရသည်။ Tags: ကချင်, ဆန်ဖရန် Related posts မြန်မာစာရေးစာဆရာ ၃...
လက်တွဲခေါ်ယူ ဖေးမကူ ဘုန်းသျှံ (လန်ဒန်ဝိဟာရ)၊ နိုဝင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၂ ၁၁.၁၁.၂၀၁၂- တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက်က လှုပ်ခတ်သွားတဲ့ ပြင်အား ၆-ဒသမ-၈၊ ရှိ သဘာဝကပ်ဆိုး ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် ဧရာဝတီ မြစ်ဘေးရှိ မလားကျေးရွာကလေး ဆိုးဆိုးရွားရွား ခံလိုက်ရပါတယ်။ ထိုရွာငယ်ကလေးဟာ ဧရာဝတီမြစ်မကြီး၏ အနောက်ဘက်ကမ်းမှာ အိမ်ခြေ (၁၆၀)ကျော်ရှိ၍ လူဦးရေ (၆၆၈) နေထိုင်လျှက် လယ်ယာလုပ်ကိုင်သူ၊ စဥ့်အိုးစဥ့်ခွက် လုပ်ကိုင်သူ၊ အရောင်းအဝယ် လုပ်ကိုင်သူတို့နှင့် အတော်အတန် စည်ကားခေတ်မှီသော ရွာငယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။ ဘာသာတရားကိုလည်း လေးစားကြ၍ ခေတ်ပညာတတ် ပေါများသော ရွာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သာသနာဘက်မှာ ကြည့်မည်ဆိုလျှင်လည်း ရဟန်း သံဃာတော်များ၊ ရှင်သာမဏေများ၊ ဘုရားပွဲ၊ ကျောင်းပွဲ၊ ရှင်ပြုမင်္ဂလာ ပွဲများနှင့် အထူးတလည်...
ပြည်သူတဦး နိုဝင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၂ ယခုအခါ နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ (GSM 2.75 G) မိုဘိုင်းများအား မြို့နယ်နှင့် ကျေးရွာများတွင် ဒေသခံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ အစည်းများ၏ အကူ အညီကိုရယူကာ အရစ်ကျငွေချေစနစ်ဖြင့် ရောင်းချရောင်းချရာတွင် အမှန်တကယ်သုံးစွဲမည့် ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏လက်ဝယ်သို့ သက်သက်သာသာနှုန်းထားဖြင့်ရောက်ရှိစေရန်အတွက် မလိုလားအပ်သော ငွေကျေးကောက်ခံမှုများ မပြုလုပ်ရန်၊ သတ်မှတ်နှုန်းထားမှအပ အပိုငွေကျေးကောက်ခံမှုမရှိစေရန်ညွှန်ကြားထားကြောင်း သိရှိရသည်။ ညွှန်ကြားချက်တွင် စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါကလည်း ထိရောက်စွာ အရေး ယူမည်ဟုပါရှိကြောင်းလည်း သိရှိရပါတယ်။ ညွှန်ကြားချက်ကို အတိအကျထုတ်ထားသော်လည်း တကယ်လက်တွေ့တွင် အိတ်ချိန်းဝန်ထမ်းများမှ ငွေကျေးကောက်ခံမှုများရှိနေသည်ဟု သိရပါတယ်။ သမ္မတကြီးမှ ဆင်းရဲမှုပပျောက်စေရေးဟုပြောကြားနေသော်လည်း အောက်ခြေ၀န်ထမ်းများမှလိုက်နာမှုမရှိဘဲ အကျင့်ပျက်ခြ စားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ရွှေတောင်၊ ပန်းတောင်း ကြိ့ပင်ကောက်မြို့နယ်တို့တွင် လျှောက်လွှာခဆိုပြီး ကျပ် ၁၀၀၀ နှင့် အုတ်ဖိုမြို့နယ်တို့...
(မိုးမခပေးစာ) နိုဝင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၂ ● ဟင်္သာတ ပဒေသာဈေးကိစ္စ (ပေးပို့သူ – ဟင်္သာတသား) ဟင်္သာတမြို့၊ မန်းဘခိုင်းလမ်း ဥယျာဉ်မြောက်ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ ပဒေသာဈေးကြီးမှ တချို့ဆိုင်တွေရဲ့ ပစ္စည်းပစ္စယတွေဟာ အတွင်းလမ်း ပါမက အပြင်လမ်းကျယ်တွေမှာ အများပြည်သူ သွားလာရခက်ခဲသည်အထိ ပိတ်ဆို့နေပါတယ်။ ဈေးကော်မီတီကို အသိပေးပြောကြားမှု ကြောင့် တချို့ဆိုင်တွေကို နောက်ဆုတ်ခိုင်းတာတွေ ဘာတွေ ပြုလုပ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ၎င်းတို့နှင့် ဆွေးမျိုးမကင်းတော်စပ်သူတွေ ကြတော့ ဘာမှပြုလုပ်ခိုင်းခြင်းမရှိပဲ နဂိုအတိုင်းပဲ ဈေးခင်းကျင်းများရှိနေသဖြင့် မည်သူ့သို့ တိုင်ကြားရမည်မှန်း မသိပါ။ ယခုအခါ ဆောင်းရာသီအစဖြစ်သော်လည်း ပူပြင်းလှတဲ့အတွက် မီးဘေးအတွက်စိုးရိမ်နေကြရပါတယ်။ သင်ငူ၊ မွေ့ရာ၊ ပရဆေးများကို ဈေးအတွင်း ဖြစ်သလိုစုပုံထားပြီး ကော်မီသို့ တင်ပြပြောဆိုပြန်သော်လည်း ဆွေးမျိုးမကင်းတော်သူများဖြစ်နေသည့်အတွက် မည်သည့်အရေး ယူမှုမှ မရှိခဲ့ပါ။ ...
လွမ်းမော … ရာသီ တင်ကိုမင်းညို ။ နိုဝင်ဘာ ၉၊ ၂၀၁၂ လူသည် လွမ်းမောတတ်သော သတ္တ၀ါဖြစ်သည်။ လူနှင့် တိရိစ္ဆာန်အကြား စည်းခြားလိုက်သည့်အရာထဲတွင် လူ၏လွမ်းမောတတ်သော စိတ်ခံစားမှု သတ္တိသည်လည်း ပါဝင်မည်ဟုထင်သည်။ လွမ်းမောတတ်သော အလွမ်းသည် မေတ္တာတရားမှ မြစ်ဖြားခံ ဖြစ်တည်လာသည်ဟု ယုံကြည်သည်။ အိပ်၊ စား၊ ကာမ သုံးခုသာ သိသော၊ ပြုမူလုပ်ဆောင်လျှက်ရှိသော တိရိစ္ဆာန်တွင် မေတ္တာတရားအတွက် နေရာမရှိနိုင်ပေ။ ငယ်ဘ၀ ကစားဖေါ်၊ ကစားဖက် သူငယ်ချင်းများကို လွမ်းသည်။ ငယ်ဘ၀ စာသင်ကျောင်းကလေးကို လွမ်းသည်။ ရွာဦး ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းတွင် စာစသင်ခဲ့သည်။ ဘုန်းကြီး၏ ကျက်သရေခန်းထဲက ငှက်ပျောခိုင်များကို လွမ်းသည်။ ဘုန်းကြီး ကျိန်းနေချိန် သူငယ်ချင်းများနှင့် ငှက်ပျောသီးခိုးစားကြသောအခါ ဖြစ်ပေါ်လာသည့်ရင်ခုန်သံကို လွမ်းသည်။...
Page 106 of 130«1...104105106107108...130»